Dika · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Dika
Mediam-bahoaka25 Febroary 2022
Fidirana10 Desambra 2018
Fantaro ilay rafitra vaovao hisolo ny "Pejy Fandrakofana Manokana".
fandikàna-gazety 21 Oktobra 2019
Taratasim-pifandraisan'ny mpandika: Mpiteny teratany, mpandikateny sy zavatra maro hafa!
Mediam-bahoaka 14 Jolay 2019
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2015) Mirary Alatsinainy finaritra ry GV'ers! Arahaba ary tongasoa ato anatin'ny taratasim-pifandraisana farany ho an'ny mpandika… ho an'ny taona 2015! Manantena aho fa samy nahafinaritra daholo ny fialantsasatrareo ary vonona ianareo ny hipetraka hianatra zavatra misimisy kokoa momba ny … Mpiteny teratany Amin'ny maha-mpiteny...
Fandikan-teny: Inona no fitaovana ampiasainao?
Maro ireo fitaovana azon'ny mpandika teny ampiasaina amin'izao andro izao - ahoana no ahafahan'ny olona mahafantatra ireo fitaovana ireo, tsy lazaina intsony hoe inona no tokony hampiasainy? Inona no ampiasain'ny mpandika teny ankehitriny?
Inona ny fitaovam-pandikan-teny tianao indrindra?
Tsy misy tsara noho ny mifanampy, mifampizara izay fitaovana ampiasainao. Sa ahoana?
Hafanam-po 04 Jolay 2019
Miara-miasa ny Meedan sy ny Lingua mba handika ny RightsCon ho amin'ny teny Espaniola sy Arabo
Mediam-bahoaka 03 Jolay 2019
Niara-niasa tamin'ny Meedan ny Lingua mba handika ireo sioka RightsCon ho amin'ny teny Espaniôla sy Arabo, manomboka ny alarobia 30 martsa ka hatramin'ny zoma 1 aprily 2016.
fandikàna-gazety 03 Jolay 2019
Rentsika foana ireo teny roa ireo rehefa miasa amin'ny tetikasa fandikan-teny. Ny ankamaroan'ny olona dia mahafantatra fa samihafa kely izy ireo, fa ny mpanjifa kosa matetika mampifangaro azy ireo. Indraja Athluri nametraka sary lehibe mba hampiseho ny fahasamihafana misy eo amin'ny fandikan-teny sy ny famangitana.